Home Wararka Luis Aleman oo ah Ninkii Farmajo u soo kireeyey Dayuuradda oo Geeyey...
Luis Aleman oo ah Ninkii Farmajo u soo kireeyey Dayuuradda oo Geeyey Kinshasa, DRC.
Luis Aleman oo ah ganasade reer New Jersey oo xiriir dhow a leh Afrika, kuna magacaaban inuu yahay maamulah shirka ka ganacsata Bunka laga keeno Itoobiya oo la yiraahdo Ethiopian Wild Coffee ayuu ahaa ninkii Xamar yimid oo Farmajo ka kaxeeyey si uu u geeyo Kinshasa.
Mr Aleman waxaa uu ahaa ninkii Farmajo ku xeray madaxweynaha Congo oo ah guddoomiyaha Midowga Africa ee sannadkan, waxaanu u soo kireeyey dayuuraddii Farmajo Xamar ka qaadday oo geysay Kinshasa, DRC. Lacgta dayuuradda lagu keenay waxaa bixiyey Dowladda Somaliya oo hadda uu Beyle ka cabaadayo Mushaar La’aanta soo socota ee shaqaalaha iyo ciidamada.
Mr.Aleman ayaa horay sidaan oo kale shaqo waasta ah (lobbying) ugu sameeyey MW Conco Felix Tshisekedi 2019, kaas oo ku xeray dowladdii Trump oo iyada marwaliba aaminsaneyd in wixii la sii qaadan karo la sii qaato markey noqoto waddamada dunida kale.
Mr. Aleman waxaa uu la socday dayuuradda markii ay Xamar imaneysay, waxaanu sii raacay Farmajo ilaa Kinshasa, waanu soo celiyey halkaas oo uu ugu sheegay inuu suuq geyn doono muddo korosigiisa oo Farmajo iyo Kooxdiisa looga shubtay $150,000 taas oo hadda qaraxday, lacagtiina la qaatay waayo waxay xogtu sheegeysaa in reer Farmajo lagu eedeyey inayan sirta qarin, laakiin qaris iska dhaafe waxaa bannaanka la soo dhigay heshiiskii oo sidiisii ah.
Arrinkan oo MOL hadda ku daba jirto waxaan idiin soo bandhigeynaa wixii ku soo kordha, iyadoo horay aannu idiin kugu soo gudbinnnay qeyb ka mid ah xogtaan.